युवा नेताको प्रदेश मन्त्रीमा बार्गेनिङ - ebudhabar.com - Different taste of news, views & analysis.
युवा नेताको प्रदेश मन्त्रीमा बार्गेनिङ
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) लाई क्रियाशील राजनीतिक दलका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मै एमालेको संगठन मजबुत, सुदृढ र शक्तिशाली हुनुमा नेता–कार्यकर्ताहरूको सक्रियता र हरेक जनवर्गीय संगठनका सदस्यहरूको लगावलाई लिइने गरिएको छ । साथै, स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि एमाले पहिलो शक्तिको रूपमा स्थापित हुनुलाई एमालेका कार्यकर्ताहरूकै क्रियाशीलता मान्न सकिन्छ ।
तर, लाखौं युवालाई गोलबन्द गर्ने एमालेको भ्रातृ संगठन युवासंघ भने अहिले अस्तित्वमा छ कि छैन, खोज्नुपर्ने बेला भएको छ । युवा संघको अधिवेशन हुन नसकेको त वर्षौं भयो, केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नै नसकेको एक वर्ष पुग्यो । एक वर्षअघि २०७३ माघ २३–२५ सम्म बसेको बैठकपछि अहिलेसम्म एकपटक पनि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सकेको छैन ।
२०७२ कात्तिक १५–१६ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष निरु पालले राजीनामा दिएपछि राजीव पहारीको नेतृत्वमा नवौं आयोजक कमिटी गठन भएपछि संघको अत्तोपत्तो नै हुन छाडेको हो । सो बैठकले ६ महिनाभित्र सम्मेलन गर्ने भनेर पहारीलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, ६ महिनामा सम्मेलन गर्ने कुरा त टाढाकै विषय रह्यो, बैठक मात्रै पहारी अध्यक्ष भएको १६ महिनापछि हुन सकेको थियो ।
२०७४ वैशाख ९–१२ सम्म हेटौंडामा अधिवेशन गर्ने निर्णय भए पनि चुनावलाई बहाना बनाएर अधिवेशन सार्ने काम गरिएको थियो । पहारीलाई संयोजक बनाए पनि उनले संघ हाँक्न नसकेपछि चुनावअघि उनलाई हटाउन हस्ताक्षर अभियानसमेत चलेको थियो । उक्त हस्ताक्षर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई समेत बुझाइएको थियो । तर, चुनावको मुखमा विवाद चर्काउँदा त्यसले असर पुग्छ भनी हस्ताक्षर प्रकरणलाई गुपचुप राखिएको थियो ।
संयोजक पहारी अहिले प्रदेशसभा सांसदमा निर्वाचित भएका छन् । उनी मंसिर २१ गते सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनमा कास्कीको क्षेत्र नं. ३ (ख) बाट निर्वाचित भएका हुन् । सांसदमा निर्वाचित भएपछि उनलाई युवा संघको नेतृत्व छाड्न दबाब आइरहेको छ । केन्द्रीय समितिका बहुसंख्यक सदस्यले उनलाई पद छाड्न दबाब दिइरहेका छन् । तर, अचेल सांसद पहारीले भने एमालेको नेतृत्व तहसँग बार्गेनिङ गरिरहेको कुरा खुल्न आएको छ । यसअघि, एमालेको नेतृत्वसामु उनले ‘आफूलाई सांसदको टिकट दिए युवा संघको अध्यक्ष छाड्छु’ भनेर वाचा गरेको बताइन्छ । उनले भनेबमोजिम नै एमालेले उनलाई टिकट दिएको थियो र उनी निर्वाचित पनि भए । अहिले भने उनले फेरि नयाँ बार्गेनिङ नेतृत्वसामु गरिरहेको बुझिएको छ । सूत्रका अनुसार उनले आफूलाई ४ नम्बर प्रदेशको मन्त्री बनाए युवा संघको अध्यक्ष तत्काल छाड्ने बताइरहेका छन् ।
एमाले नेतृत्वसामु मन्त्रीका लागि बार्गेनिङ गरे पनि युवा संघका अधिकांश सदस्यहरू भने उनीप्रति रुष्ट छन् । पहारी रहेसम्म युवा संघको सम्मेलन नहुने निष्कर्ष निकाल्दै उनलाई हटाउनुपर्ने आवाज प्रखर बन्न पुगेको छ । एक जना केन्द्रीय नेताले भने, ‘हामीले उहाँलाई तुरुन्त बैठक बोलाउनुस् भनेका छौं । तर, उहाँले समय दिन सक्नुभएको छैन । उहाँ संयोजक रहेसम्म युवासंघको सम्मेलन हुन कठिन छ ।’
अध्यक्ष बन्न आनाकानी
सेटिङ मिलाउनेलाई काखा, अरूलाई पाखा
सशस्त्रमा पाँच डीआईजीका लागि तीव्र दौडधुप
मध्यक्षेत्रमा कवीन्द्रमानको आतंक
जिम्मेवारी टुंगिएपछि त्रिपाठी नेकपामा भित्रिने
सरकारको बचाउ गर्दा मन्त्री पद चट
को हुन् भीआईपी पुत्रका ‘कटप्पा’ ?
दुई वर्षपछि नेकपाको महाधिवेशन, निर्वाचनको विकल्प खुला